IZINTO EKUFUNEKA ZENZIWE NGABAFAZI MALUNGA NEE-OVARI: UMSEBENZI, INDAWO KUNYE NEPAIN - IMPILO
Yintoni Wonke Umfazi Oyaziyo Ngee-Ovari Zakhe
Ama-ovari ngamadlala amile okwekhiwane alala ngapha nangapha kwesibeleko kwaye abalulekile kwinkqubo yokuzala yowasetyhini-kwaye anazo nezinye iindima ezibalulekileyo emzimbeni ngokunjalo. Nantsi yonke into umntu wasetyhini ekufuneka eyazi malunga nama-ovari akhe: ukuba zibekwa phi, zisebenza njani, kwaye ujonge ntoni ukuzigcina usempilweni.
Zenza ntoni kanye ii-ovari zakho?
Ii-ovari zomsebenzi zidume kakhulu kukugcina amaqanda omfazi, microscopic kwaye igcwaliswe nge-DNA (isiqingatha seDNA yakhe, ukuba ichaneke, ke ukuba iqanda lichumiswe sisidoda, esiqulathe isiqingatha seDNA yendoda, xa zidibene zinokwenza umbungu). Nyanga nganye, ishumi elinamaqanda okanye amaqanda anokukhula, kodwa linye kuphela — okanye amabini, kwimeko yamawele — ayavuthwa, ashiye isizalo sawo, aze anqumle kumbhobho wesibeleko esiya esibelekweni, apho anokuhlangana khona okanye angadibani nesidoda .
Ama-ovari anomnye umsebenzi obalulekileyo ngaphandle kokugcinwa kwamaqanda ixesha elide: Zikwavelisa iihomoni. Ngokuyintloko, benza i-estrogen kunye neprogesterone, enxulunyaniswa nempilo yokuzala yabasetyhini, kodwa ii-ovari zivelisa ne testosterone. Zonke ezi hormone zishiya ii-ovari kwaye zihamba zihamba emzimbeni wakho ngegazi lakho. Abagcini nje ngenkqubo yokuzala besempilweni kodwa banegalelo kwithambo, izihlunu, kunye nokukhula kwengqondo ngokunjalo.
Mangaphi amaqanda akwii-ovari zakho- kwaye kwenzeka ntoni kanye kuwo?
Uzalelwa ngama-ovari aqukethe amaqanda ayi-1 ukuya kwezi-2 ezigidi. Ngokufikisa, elo nani liyehla liye kuma-300 000, kwaye xa uyeka ukuya exesheni ushiyeke kungekho namnye. Uninzi lwazo luthi sayonara ngenkqubo yendalo ye-celldeath (ebizwa ngokuba yi-apoptosis). Kuba amaqanda mancinci kakhulu, aphinde abuyiselwe emzimbeni. Malunga namaqanda angama-400 ahamba kwinkqubo ye-ovulation ngexesha lokuphila kwakho. Kuze onke amaqanda akho aphele, ukuphuma kweqanda kwenzeka inyanga nenyanga-iqanda liphuma nge-ovary follicle kwaye liphume kwi-ovary, emva koko lihamba nge-fallopian tube ukuya esibelekweni. Iifollicles emva koko zikhupha iihormoni ukulungiselela ubume besibeleko sokukhulelwa. Kodwa ukuba iqanda alichunyiswanga, ukuphuma kwehomoni kuyayeka, kwaye ufumana ixesha lakho. Umgangatho weqanda uyehla ngokuhamba kwexesha-esinye sezizathu ukuba kunzima ukukhulelwa kwiminyaka yakho yama-30 nangaphaya.
Ithetha ntoni into yokuba amaqanda akho enzakalise?
Ukuba ifollicle ayigqabuki ikhuphe iqanda, inokudumba ngamanzi ize ikhule ibe ngumqala. Uninzi lwee-cysts zincinci kwaye azinantlungu, kwaye akunakulindeleka ukuba wazi nokuba unayo de kuvavanywe i-pelvic; zihlala zihamba zodwa kwaye kunqabile ukuba zibe ngumanduleli womhlaza. Kwabanye abantu, i-cyst inokubangela iintlungu zesisu, imvakalelo yokugcwala kwesisu, kunye amaxesha angaqhelekanga .
Isifo sePolycystic ovary syndrome (PCOS)
Isifo sePolycystic ovary syndrome (PCOS) yenye imeko enokuthi ivele. Ebonakaliswe ziimpawu ezinjenge-acne, ukuzuza ubunzima, i-acne, ixesha elingavumelekanga, okanye ukukhula kweenwele zomzimba, kuthintela ukuya kuma-20 ekhulwini kwabasetyhini kwaye kuthetha ukuba ii-ovari zakho zivelisa ama-hormone amaninzi wesini; oku kugcina iifollic zivaliwe, kukhuthaza ii-cysts ukuba zenze. Ukulawula inzala inokunceda ukuyilawula.
Ngaphezulu kwabasetyhini abangama-20 000 abafunyaniswa benesifo umhlaza wesibeleko ngonyaka nganye. Umhlaza we-Ovarian uhlala ubizwa ngokuba ngumbulali othuleyo, kuba amathumba kunqabile ukuba afunyanwe kwangoko, kwinqanaba lokunyanga kulula. Ngenxa yokuba ii-ovari zakho zikufuphi nesinyi kunye namathumbu, iimpawu zibandakanya: ukudumba, isisu, umqolo, okanye iintlungu zangasese, ukungagayeki, urhudo okanye ukuqhina, ukuchama rhoqo, ukuziva ugcwele ngokungaqhelekanga, kunye nokulahleka kwamandla okanye ukutya. Kuba le miqondiso isilumkiso kulula ukuyityeshela, nikela ingqalelo emzimbeni wakho-kwaye uqiniseke ukuba ukhangela ugqirha wakho ukuba uziva ngaphezulu kwamaxesha ali-12 ngenyanga.
Kwenzeka ntoni kwii-ovari zakho ngexesha lokuyeka ukuya exesheni?
Ukuyeka ukuya exesheni kuxa ama-ovari ebeka iinyawo zawo zokomfuziselo kwaye aphumle, kwaye iminyaka embalwa ekhokelela kuyo inokuba lixesha elingalindelekanga elibizwa ngokuba yi-perimenopause. Njengama-ovari akho ubudala, azinakuhlala zithatha umqondiso kwiihormone zakho zokuba lixesha lokukhulula iqanda, elikhokelela ekubeni kufihlwe iihormoni ezininzi, ziphose izinto kubhalansi. Oku kungakhokelela kumaxesha ahluka-hlukeneyo, ukutshintsha kwemozulu, imiba yokulala , kunye kushushu . Ngethamsanqa, ugqirha wakho unokukunceda ufumane iindlela zokulawula ezi mpawu zibuhlungu.
Ungazigcina njani ii-ovari zakho zisempilweni
Zintathu iindlela ezilula zokugcina ii-ovari zakho zikwimo yencam ephezulu.
Fumana uvavanyo lwe-pelvic lonyaka: Oku kunokunceda ugqirha wakho abambe imiba enjengee-cysts kunye ne-tumors ezingasoloko zibangela iimpawu.
Musa ukutshaya: Iikhemikhali kumonakalo wecuba lomdiza amaqanda emfuzo enziwe kwaye abangele ukuba afe ngokukhawuleza; oku kunokunciphisa ukuzala okanye kuzise ukuyeka ukuya exesheni ngaphambili.
Gcina ubunzima obusempilweni: Oku kunceda ukugcina iihormoni, kwaye ke ixesha lakho, lilawulwa kwaye linokunceda ukunciphisa iimpawu zePCOS.
Eli bali libaleke kuthintelo luka-Matshi 2019. Ukufumana amanye amabali afana neli, Rhuma kwimagazini yethu yokuprinta .
Olona hlobo lomthambo lokutshisa amanqatha esisu
11:11 amanani eengelosi
Ithetha ntoni i-999 ngokwasemoyeni
lithetha ntoni inani leengelosi eziyi-1111
Kutheni iinyawo zam zibuhlungu nje